Windows 8 / 8.1 / 10 मा FSX कसरी स्थापना गर्ने? - Rikoooo
कसरी विन्डोज 8 / 8.1 / 10 मा FSX स्थापना गर्न?
FSX (सबै संस्करण) विंडोज 8 / 8.1 मा स्थापना गर्नका लागि, यी कदम:
1- को डीभिडी संग सामान्यतया FSX स्थापना गर्नुहोस्।
2- स्थापना माथि छ जब, सही क्लिक गर्नुहोस् «fsx.exe» (तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ: सी: \_ कार्यक्रम फाइलहरू (x86) \_ Microsoft उडान सिम्युलेटर एक्स माइक्रोसफ्ट खेल \_)। यहाँ, को «अनुकूलता» ट्याब चयन र विन्डो सेट अप तल देखाइएको:
3- डाउनलोड 32 «को संस्करण बिट UIAutomationCore », फाइल अनजिप र FSX मुख्य फोल्डरमा टाँस्नुहोस् (सी: \_ कार्यक्रम फाइलहरू (x86) \_ Microsoft खेल माइक्रोसफ्ट उडान सिम्युलेटर एक्स \_ \_)। यो FSX को अनपेक्षित दुर्घटनाहरु को समस्या ठीक हुनेछ।
अब, यी साना कदम पछि, FSX स्थिर विन्डोज 8 / 8.1 र 10 हुनुपर्छ